Fanandramana miaraka amin'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
"Avia fotsiny tahaka anao!" Fampahatsiahivana izany fa hitan’Andriamanitra ny zava-drehetra: ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra ary ny fitiavany antsika. Ny antso ho tonga tsotra tahaka ny maha-izy anao dia taratry ny tenin’ny apostoly Paoly ao amin’ny Romana manao hoe: “Fa Kristy maty hamonjy antsika, na dia malemy aza. Zara raha misy maty noho ny amin’ny olo-marina; noho ny hatsaram-pony dia azony atao ny mikely aina. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika » (Rom 5,6- iray).
Betsaka ny olona ankehitriny tsy mieritreritra ny momba ny ota intsony. Ny taranaka maoderina sy postmodernal kokoa dia mieritreritra bebe kokoa momba ny fahatsapana fahatsapana ho "fahafaha-manao", "tsy manana fanantenana" na "tsy fahatokisana", ary hitan'izy ireo ny anton'ny tolona anatiny ao anaty fahatsapana fahatongavana ho ambany. Mety hiezaka ny ho tia ny tenany izy ireo ho fomba iray hahatongavana, fa indrindra noho ny tsy izy, tsapan'izy ireo fa feno tanteraka sy tapaka ary tsy ho azo antoka intsony izy ireo.
Fa Andriamanitra tsy mamaritra antsika amin’ny lesoka sy ny tsy fahombiazana; hitany ny fiainantsika manontolo: ny tsara, ny ratsy, ny ratsy fanahy ary tia antsika ihany koa izy. Na dia tsy sarotra amin’Andriamanitra aza ny mitia antsika, dia matetika no sarotra amintsika ny manaiky izany fitiavana izany. Fantatsika lalina fa tsy mendrika izany fitiavana izany isika. Ao amin'ny 1st5. Tamin’ny taonjato faha, i Martin Luther dia nanao tolona mafy mba hanana fiainana lavorary ara-pitondrantena, kanefa hitany hatrany fa tsy nahomby izany, ary tao anatin’ny fahasorenana dia nahita fahafahana tao amin’ny fahasoavan’Andriamanitra izy tamin’ny farany. Tamin’izany fotoana izany, i Luther dia efa nifandray tamin’ny fahotany — ary tsy nahita afa-tsy ny famoizam-po — fa tsy nifandray tamin’i Jesosy, ilay Zanaka lavorary sy malalan’Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao, anisan’izany ny an’i Lotera.
Ankehitriny, olona maro, na dia tsy mieritreritra ny momba ny ota aza, dia mbola mahatsapa famoizam-po ary feno fisalasalana izay miteraka fahatsapana lalina izay tsy tiana ny olona iray. Ny tokony ho fantatrao dia, na dia eo aza ny fahabangany, na dia tsy misy vidiny aza izy ireo dia omen'Andriamanitra ary tia azy ireo. Tia anao koa Andriamanitra. Na dia mankahala ota aza Andriamanitra, dia tsy halany ianao. Tian'Andriamanitra ny olon-drehetra, na ny mpanota aza, ary mankahala ny ota mihitsy satria mandratra sy manimba ny olona.
"Avia rehefa tonga ianao" dia midika fa tsy miandry anao hihatsara Andriamanitra alohan'ny hahatongavanao azy. Tena tia anao izy, na eo aza ny zavatra nataonao. Nanamboatra lalana iray amin'ny zavatra rehetra izay mety hampisaraka anao aminy izy. Nanome antoka ny fandosiranao anao avy any amin'ny tranomaizina rehetra amin'ny sain'ny olombelona sy ny fonao izy
Inona no manakana anao tsy hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra? Na inona na inona izy: maninona ianao no tsy manolotra an'io enta-mavesatra io an'i Jesosy, izay mihoatra noho ny afaka mitondra izany ho anao?